လိင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပညာရေးသုတေသနအကြံပေး | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းသည်လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံကိုလေ့လာသည့်ရှေ့ဆောင်ပညာရေးဆိုင်ရာပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအစားအစာ၊ နှောင်ကြိုးနှင့်လိင်စသည့်သဘာဝဆုများရရှိစေသည်။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်
ယနေ့တွင်နည်းပညာသည်သဘာဝလွန်ဆုလာဘ်များ၏“ ထူးကဲသော” ဗားရှင်းများကိုအမှိုက်ပုံး၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်အင်တာနက်အပြာစာပေများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ဤဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်မပြောင်းလဲသေးပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခြိမ်းခြောက်သည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်စွဲလမ်းမှုများကိုကူးစက်ပျံ့နှံ့စေသည်။
ယင်းဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမှာကျွန်တော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအာရုံစိုက်ပါ။ ကျနော်တို့က၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု, ဆက်ဆံရေးကို, ဆည်းနှငျ့မှုခငျးမှာကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Non-သိပ္ပံပညာရှင်များဖို့ထောက်ပံ့သုတေသနသုံးစွဲနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးရွေးချယ်မှုလုပ်ပေးနိုင်ရပါမည်။ ကျနော်တို့သုတေသနနှင့်ကဖြတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့ကြသူမြား၏အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီး porn ဖြတ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာကြည့်ပါ။ အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမှာသငျသညျစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲဖို့ခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်လမ်းညွှန်မှုကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ 23 ဇွန်လ 2014 အပေါ်ထူထောင်မှတ်ပုံတင်ထားသောစကော့တလန်မေတ္တာဖြစ်ကြသည်။
မိုဘိုင်း: 0750 647 5204 နှင့် 07717 437 727
ထောက်ခံသူ Mary Sharpe သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်လာသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကမာရိသည်စိတ်စွမ်းအားကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့် The Reward Foundation မှချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်တို့၏တကယ့်ပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ကူညီရန်သူမ၏ကျွမ်းကျင်သောအတွေ့အကြုံ၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့်ပညာသင်ဆုများကိုတောင်းဆိုသည်။ Mary အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကနှိပ်ပါ ဒီမှာ.
ဒေါက်တာ Darryl Mead သည် The Reward Foundation ၏ဥက္ကဌဖြစ်သည်။ Darryl သည်အင်တာနက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ခေတ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်စကော့တလန်၌ပထမဆုံးသောအခမဲ့အများသုံးအင်တာနက်စက်ရုံတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ပြောင်းလဲခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စကော့တလန်နှင့်ယူကေအစိုးရများအားအကြံပေးခဲ့သည်။ Darryl သည် Chartered စာကြည့်တိုက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ပညာရှင်များ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်ပြီးလန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်မှဂုဏ်ထူးဆောင်သုတေသနတွဲဖက်ဖြစ်သည်။ 1996 နိုဝင်ဘာလတွင် Darryl သည်သူ၏ရာထူးသက်တမ်းကို The Reward Foundation ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဥက္ကဌဖြစ်လာခဲ့သည်။
အန်း Darling တစ်ဦးမှသင်တန်းဆရာနှင့်လူမှုရေးအလုပ်အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်လွတ်လပ်သောကျောင်းကိုကဏ္ဍတွင်ပညာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလေ့ကျင့်ရေးပေးပါသည်။ အန်းလည်းအင်တာနက်ကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအပေါငျးတို့သရှုထောင့်အပေါ်မိဘများအစည်းအဝေးများကယ်တင်တတ်၏။ သူမသည်စကော့တလန်အတွက် CEOP သံအမတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်နိမ့်မူလတန်းကလေးများများအတွက် '' ကို Safe ကိုယ် Keeping '' အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
mo Gill 2018 ၌အကြှနျုပျတို့၏ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်အကြီးတန်း HR ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအထူးကု, သင်တန်းနည်းပြ, အာမခံနှင့်နည်းပြဖြစ်ပါတယ်။ mo ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖွဲ့အစည်းများ, အသင်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ 30 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ သူမသည်အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းအလုပ်နှင့်အတူကောင်းစွာ align ထားတဲ့စိန်ခေါ်မှုအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအကွာအဝေးအတွက်အများပြည်သူအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ကဏ္ဍများတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။